Haddii January La Soo Gaadho Oo Uu Heshiis Saxiixi Waayo, Liverpool Ma Sii Joogi Doono. - Gool24.Net
Haddii January La Soo Gaadho Oo Uu Heshiis Saxiixi Waayo, Liverpool Ma Sii Joogi Doono.
October 12, 2019 Mahamoud Batalaale
Khabiirka kubbada cagta ee Noel Whelan ayaa aaminsan in uu jiro xidiga ka tirsan kooxda Liverpool oo uu aaminsan yahay in aanu sanadka cusub ee 2020 qayb ka sii ahaan doonin kooxda Jurgen Klopp.
Noel Whelan ayaa ku dooday in Adam Lallana uu iskaga bixi doono Liverpool kadib markii uu boos ka waayay kooxda Jurgen Klopp ee Reds.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa shaxda kooxdiisa ee khadka dhexe waxa uu xili ciyaareedkan laba ka mid ah u xidhay Gini Wijnaldum iyo Fabinho halka booska saddexaad uu ku soo wareejinayay James Milner, Jordan Henderson iyo Alex Oxlade-Chamberlain.
Waxayna taasi keentay in Adam Lallana uu ka mid noqday ciyaartoyda kursiga kaydka lagu soo ilaaway ee aan helin fursad ay ku ciyaaraan.
Noel Whelan ayaa ku dooday in haddii ilaa bisha January uu Adam Lallana heshiis cusub saxiixi waayo in ay taasi la micno tahay in waayihiisii ciyaareed ee Liverpool ay soo dhamaan doonaan.
Heshiiska uu Adam Lallana ku joogo Anfield ayaa dhacaya dhamaadka xili ciyaareedkan mana jiro ilaa hadda tilmaan muujinaysa in uu heshiis cusub saxiixi doono.
Ugu horayn Noel Whelan oo ka hadlaya sababta uu Adam Lallana ku bixi doono ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in haddii aynu nimaadno January oo aanu heshiis cusub saxiixin, isaga kuma arki doontid kooxdan kubbada cagta sanadka soo socda”.
“Eeg isagu waa ciyaartoy fantastik ah, mana jiri doonaan kooxo ku yaraan doonaa kuwaas oo isaga qaadan doona, laakiin ugu dhawaan ma noqon doonaan afarta ugu sareeya” ayuu Whelan hadalkiisa raaciyay.
Khabiirka Noel Whelan ayaa aaminsan in hadda ay Lallana ku adag tahay in uu boos uga dagaalami karo Liverpool wuxuuna yidhi: “Waxaan filayaa in hadda ay aad ugu adag tahay Lallana in uu naftiisa ku riixo kooxda kowaad”.
Adam Lallana iyo Shaqiri ayaa xili ciyaareedkan ah labada xidig ee khibrada leh ee aan fursad ka helin Jurgen Klopp halka Origi uu noqday midka inta ugu badan kaydka ka soo baxayay ee uu Klopp aaminsan yahay in uu wax badali karo.